Yini indlela yokukhombisa uthando kuNkulunkulu? - Mytika Speak
Ikhaya / UNkulunkulu Nokwamoya / Yini indlela yokukhombisa uthando kuNkulunkulu?
Isisho se li-ove isenzo sokunikeza nokwamukela ukukhanya kwe- uNkulunkulu. Uma ukhombisa ukuthanda noma yini enyameni, uNkulunkulu ongaphakathi kwakho ukhombisa uthando kuNkulunkulu ongaphakathi kwabo.
Isibonelo, uDarren wayeneminyaka engu-18 lapho enikezwa imoto yakhe yokuqala lapho eqeda isikole. Kuyo yonke iminyaka yakhe yasekolishi, imoto yakhe yayimhambisa ngokuphepha nomaphi lapho ayedinga ukuya khona. Kwakukuyo leyo moto lapho aqala khona usuku lwakhe lokuqala nomkakhe wakusasa. Lapho uDarren edinga indawo yokuba yedwa, wayethola ukuthula ngenkathi ehleli emotweni yakhe futhi elalele umculo. Kwamqhuba wagoduka esibhedlela ngemuva kokuzalwa kwengane yakhe yokuqala. Lapho wayekhungathekile futhi edinga indawo yokudabuka, kwakuyindawo yakhe engcwele. Imoto kaDarren iveze uthando lukaNkulunkulu kuye futhi wayekhona kuye noma nini lapho eyidinga. Ngokugcina, ukulungisa noma ukunikela ngemoto kumuntu ozoyinakekela, uDarren ukhombisa ukwazisa nothando kuNkulunkulu.
Ukunikela kungasho ukuthi unayo, ngenkathi ukwamukela kungasho ukuthi uyakudinga. Ngihlala ngizizwa ngigcwalisekile lapho nginikela kodwa ngingakhululeki lapho ngicela. Uma nginikezwe ukukhetha, ngincamela ukunikela kunokuthola.
Amathegiukuqonda uNkulunkulu Ukubonga Ugqozi ukuthanda ingokomoya